युगल जोडीमा यौन जीवन सुधार्न के कस्ता खाने कुरा को सेवन गर्ने ? - Eall Nepal
युगल जोडीमा यौन जीवन सुधार्न के कस्ता खाने कुरा को सेवन गर्ने ?
एजेन्सी– यदि कुनै एउटा खास खानेकुराले मानिसको यौनशक्ति वा यौन आनन्द बढाइदिने प्रमाण फेला परेमा त्यो निकै विक्री हुन्थ्यो होला ।
सन्तुलित खानपान, सक्रिय जीवनशैली तथा सही मानसिक स्वास्थ्यले तपाइँको यौन जीवन राम्रो बनाइदिन सक्छन् । तर के कुनै खास खानेकुरा छन् त जो प्राकृतिक रूपमै यौनशक्तिवर्द्धक छ ?
जुन खानाले मनमा खुसीयाली उत्पन्न गराउने इन्डर्फिन तत्व शरीरमा उत्पादन गराउँछ तिनमा वास्तवमा स्वस्थ यौन इच्छासँग सम्बन्धित तत्व पनि हुन्छन् । तिनलाई बरोबर यौनवर्द्धकको रूपमा समेत प्रस्तुत गरिन्छ ।
यस्ता दाबीका पछाडि रहेका इतिहास तथा विज्ञान एकपटक जानौं । के कुनै विशेष खाना छ जसले यौन जीवनमा सुधार ल्याउँछ ?
ओयस्टर यौनवर्द्धकको रूपमा ठानिनुलाई ग्रीक किम्वदन्तीमा प्रेमकी देवी एफ्रोडाइटको उत्पत्ति समुन्द्रमा भएकोसँग जोडेर हेरिन्छ शायद इतिहासकै सबभन्दा प्रख्यात प्रेमी क्यासानोभाले बिहानी नास्तामा ५० वटा ओयस्टर खान्थे भन्ने मान्यता रहेको छ ।
तर ओयस्टर सेवन र यौनशक्तिबारे कुनै प्रमाणित सम्बन्ध पाइँदैन। किम्वदन्ती अनुसार ग्रीक प्रेमकी देवी एफ्रोडाइटको उत्पत्ति सेतो फिँजबाट भएको थियो र उनी समुन्द्रबाट निस्किएकी थिइन् । त्यसैले समुन्द्री खानेकुरा यौनवर्द्धक मानिने मान्यता रहेको छ ।
तर जे होस् ओयस्टर खान रुचाउनेहरूका लागि खुसीको खबर के छ भने यी महँगा मोलस्क जातीका प्राणीहरूमा प्रशस्त जींक तत्व पाइन्छ जुन् टेस्टोस्टेरोन उत्पादनमा अत्यावश्यक हुन्छन् ।
साथै अनुसन्धानहरूका अनुसार जींकले पुरुषको नपुंसकताको उपचार गर्न तथा वीर्यको गुणस्तर सुधार्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने देखाएका छन् । जींकका अन्य स्रोतहरूमा शेलफिस, रातो मासु, बियाँ (उदाहरणका लागि फर्सीको बियाँ वा तील), काजु, हाडे बदाम, चना, राजमा, दूध तथा चीज पर्छन् ।
डार्क चकलेटको प्रयोग
वैज्ञानिकहरू भन्छन् डार्क चकलेट खाँदा प्रेममा परेको जस्तै किसिमको आनन्द अनुभव हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार डार्क चकलेट खाँदा प्रेममा परेको जस्तै किसिमको आनन्द अनुभव हुन्छ किनकि त्यसमा ‘प्रेम रसायन’ फिनाइलइथाइलामाइन (पीइए) हुन्छ।
कसैसँग प्रेमसम्बन्धमा पर्दाका सुरुवाती समयमा सञ्चार हुने पीइएले शरीरमा आनन्द अनुभव गराउने डोपामाइन नामक हर्मोन पनि निष्कासन गराउँछ । साथै, मस्तिष्कको आनन्दसम्बन्धी केन्द्रलाई पनि यसले सक्रिय बनाउँछ । तर चकलेटमा निकै कम मात्रामा मात्र पीइए हुन्छ।
कोकामा ट्रिप्टोफान नामक एमिनो एसिड पनि हुन्छ जसले रक्तसञ्चार तथा सेरोटोनीनको (आनन्दको अनुभूतिसँग जोडिएको अर्को हर्मोन) स्तर बढाइदिन्छ।
त्यसोभए कहिलेदेखि चकलेट र यौनबीचको सम्बन्ध गाँसियो? शायद १६ औँ शताब्दीतिर हुनुपर्छ।
हेर्नान कोर्टेस १६ शताब्दीका एक स्पेनी कंक्विस्टेडर (अमेरिकी महादेशका भूभाग कब्जा गर्न खटाइएका लडाकू) थिए जो माया तथा एज्टेक साम्राज्यहरूमा पुगे । हाल मेक्सिको रहेको सम्पूर्ण जसो भूभाग कब्जा गरेर उनले क्यास्टिल साम्राज्यको अधिनमा ल्याए। चकलेटको सम्पर्कमा आउने पहिलो युरोपेली उनै भएको ठानिन्छ।
उनले स्पेनका राजालाई लेखेको पत्रमा आफूले स्थानीय माया समुदायका मानिसहरूले कोकाको झोल खाने गरेको देखेको र त्यसले ‘प्रतिरोध क्षमता बढाइदिने र थकान हटाउने’ उल्लेख गरेका छन् । तर निश्चित रूपमै चकलेटको प्रयोग यौनवर्द्धक ओखतीको रूपमा भएको प्रमाण भने छैन।
ट्रिप्टोफानका अन्य स्रोतहरू: सालमन माछा, अण्डा, कुखुरा, पालुङ्गोको साग, बियाँ, काजुकिसमिस तथा भटमास।
खुर्सानी र यौन जीवन
खुर्सानीले शरीरभित्रका अत्यावश्यक रासायनिक क्रियाको गति एवं मुटुको चाल बढाइदिन्छ पिरो खुर्सानीमा क्याप्साइसीन हुन्छ जसले इन्डर्फिन तत्व (उही आनन्द अनुभूति गराउने तत्व) को निष्कासन सक्रिय पार्छ।
खुर्सानीले शरीरभित्रका अत्यावश्यक रासायनिक क्रियाको गति एवं शरीरको तापक्रम र मुटुको चाल बढाइदिन्छ । यौनक्रियाका बेला पनि त्यस्तै हुन्छ।
रक्सीले के गर्छ ?
रक्सीले तपाइँलाई कम लजालु बनाउँछ । रक्सीले लाज वा सङ्कोच कम गराइदिन्छ, तर म्याक्वेथले लठ्ठिएको बेलामा भनेको जस्तै यसले ‘इच्छा जगाउँछ तर प्रदर्शन खुम्च्याउँछ।’ महिला तथा पुरुष दुवैमा धेरै रक्सी पिउनाले संवेदनशीलता हराउँदै जान्छ।
लामो समयसम्म रक्सी सेवन गरिराखे त्यसले यौन इच्छा कम गराइदिनुका साथै नपुंसकता समेत निम्त्याइदिन सक्छ। साथै रक्सीको दुर्गन्धले यौन उत्तेजना पक्कै ल्याउँदैन।
यौनवर्द्धक के हुन् ?
एफ्रोडाइट – रोमनहरूले पछि उनलाई भेनसको नाम दिए – समुन्द्रबाट निस्किएको मानिन्छ। त्यसैले समुन्द्री खानेकुरालाई यौनवर्द्धक ठानिन थालियो। यौनवर्द्धक वस्तुलाई खासगरि तीन वर्गमा बाँड्न सकिन्छ – यौनशक्ति, यौनइच्छा तथा यौन आनन्द बढाउने खालका।
यिनले मानिसमा सफल काम गरेको भनेर नाप्न कठिन हुनाका कारण कुनैको पनि वैज्ञानिक प्रमाण फेला पर्न सकेको छैन। वास्तवमा हालसम्म एउटा मात्र यौनवर्द्धक वस्तुको प्रमाण फेला परेको छ। त्यो भनेको पाकेको वा कुहिएको फलफूलको गन्ध हो र त्यसले फ्रुटफ्लाइ नामक जीवमा यौनवर्द्धकको काम गर्छ।
ग्रीक परम्परामा प्रेमकी देवी मानिने एफ्रोडाइट समुन्द्रबाट निस्किएको मानिन्छ यौनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर क्रिचमान भन्छन् मानिसहरूले यौनवर्द्धक भनेर खान्छन् किनभने उनीहरूले त्यसले काम गर्छ भनेर विश्वास गर्छन्। र, यदि कसैमा केहीले काम गर्‍यो भने त्यसमा कारण किन खोजिरहनु ?
यौनवर्द्धकको रूपमा परिचित कैयौँ खानेकुरा वास्तवमै स्वस्थ खानेकुरा हुन्। तर कुनै बिरुवाबाट निकालिएको वा कुनै वस्तुबारे स्वास्थसुरक्षाको आँकडा प्राप्त छैन भने तिनबाट जोगिनु नै बेस हुनेछ।
चामत्कारिक ओखती भनेर दाबी गरिएका चीजबाट पनि टाढै रहनु राम्रो हुन्छ । यदी तपाइँमा यौनइच्छाको कमी छ भने सम्भवत: तपाइँमा अन्य स्वास्थ्य समस्या भएको हुन सक्छ, यसबारे बेलैमा चिकित्सकसँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सुरक्षित गर्भपतन गराउँदा पहिचान खुल्ने डरले असुरक्षित तरिकाले अविवाहित महिला गर्भपतन गराउदै
किसान नेता भीमदत्त पन्तको ६७औँ स्मृती दिवस आज
वडा कार्यालयमा पेट्रोल छर्केर आगजनी
नेवार समुदायको गुँला पर्व सुरु
सर्पदंशबाट झापामा दुईको मृत्यु
म सँग रात बिताउन आएको युवा मेरो स्तनपान गरेर फर्कियो-सुनिता दनुवार (भिडियो हेर्नुहोस )
शतकबाट अष्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान स्मिथको पुनरागमन
यमनमा सैनिक परेडमाथि आक्रमणमा ३२ जनाको मृत्यु
प्रितम आचार्यले उदित नारायण झा पछी बलिउडमा नेपालको नाम राख्दै,सलामान खानको फिल्ममा गीत गाउदै (भिडियो हेर्नुहोस )
प्रितम आचार्यले उदीत पछी बलिवूड मा नेपालको नाम राख्दै,सलामान खानको फिल्ममा गीत गाउदै, सुरसालाबाट चर्चामा आएका प्रितम आचार्यले अहिले सारेगमपमा…
सुनिता दनुवार-एक पटक एउटा अनौंठो घटना भयो । सायद कोठीहरुमा अपवादका रुपमा हुने घटना । एकपटक हाम्रो बंगलामा मोजमस्तीका लागि…
एजेन्सी । बहुचर्चित टेष्ट सिरिज 'एसेज सिरिज' अन्तर्गतको पहिलो टेष्टमा अष्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान स्टिभ स्मिथले शतकीय इनिङ्स खेलेका छन् । इंग्ल्याण्डको…
काठमाडौं, साउन १७ । यमनमा एक सैनिक परेडमाथि भएको आक्रमणमा कम्तीमा ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । हुथी विद्रोहीले सैनिक…
चितवन, साउन १७ । चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर–३ को कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ । वडा कार्यालयमा बिहीबार राति अज्ञात…
काठमाडौं, साउन १७ । बौद्धमार्गी नेवार समुदायको गुँला पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । नेपाल संवत् तिथिअनुसार एक महिनासम्म बुद्धको…
अज्ञात समूहद्वारा कैलालीमा जिपमा आगजनी
धनगढी, साउन १७ । कैलालीमा अज्ञात समूहले जिपमा आगजनी गरेका छन्। गोदावरी नगरपालिका ७ लालपुरका स्थानीय तिलकबहादुर शाहीका जिपमा अज्ञात…
झापा, साउन १७ । सर्पदंशका कारण झापामा पछिल्लो तीन दिनमा दुईको मृत्यु भएको छ । यही १४ साउनमा गोमन सर्पको…
श्रीमती साटासाट: आफ्नी श्रीमती भगाउनेकै श्रीमती भगाएपछि (भिडियो हेर्नुहोस कसरी श्रीमती साटेका थिए )
हेलो, तपाईं दीपक हो ? हो, किन ? म जितबहादुर दर्नाल, कतारबाट किन मेरी श्रीमती लानुभा’को ? लगेँ, तँ सक्छस्…
मध्यरातमा पहिरो खस्दा बाजुरामा आमाछोरीको मृत्यु, पाँच घाइते
बाजुरा, साउन १७ । लगातारको भारी वर्षाका कारण बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–६ बसालाको शान्तिटोलमा पहिरोमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ…
ई.अल नेपाल प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित ईअलनेपाल डटकम (www.eallnepal.com)
नेपाली भाषाको अनलाईन समाचार साइट हो ।
सूचना विभाग दर्ता नम्बर : 1084/075-076X
केशब सिंह धामी सम्पादक:- खडक सिंह धामी
ई.अलनेपाल प्रा. लि.
मोबाइल : +977-9800620133
Copyright © 2018. Eallnepal.com. All Rights Reserved.